Bryan Mbeumo Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Bryan Mbeumo Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Bryan Mbeumo Biography na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Angelique Gouge - mama), ndụ ezinụlọ, na nwanne nwanyị (Maeva Gouge). Karịa nke ahụ, Nwanyị Mbeumo/Nwunye ga -abụ, ụdị ndụ ya, ndụ onwe ya na uru ọ bara, wdg.
Na nkenke, Memoir a bụ akụkọ ndụ nke Nke Ivan Toney dere onye mmekọ. Ee, Mbeumo bụ onye nwere ọgụgụ isi maara ihe nke na -eji ụbụrụ ya eme ihe. Ndị egwu hụrụ ya n'anya maka ike ya ịgafe n'oge kwesịrị ekwesị yana maka ịchọpụta ohere kacha mma na pitch.
Sergi Canos Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Lifebogger na-agwa Bryan Mbeumo History na-amalite site na mmalite ọrụ ya-n'obodo Avallon, obodo dị na etiti ọwụwa anyanwụ France. Anyị na -aga n'ihu mgbe ọkachamara ọkachamara n'egwuregwu bọọlụ French ama ama n'egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị dị na njirimara Bryan Mbeumo's Bio, anyị emeela ka ọ dị mkpa igosipụta BMW's Early Life and Success Gallery. Ugbu a, lee isi ihe na -egosi foto na -akọwa akụkọ Mbeumo.
Biography Bryan Mbeumo - Lee mmalite ndụ ya na ihe ịga nke ọma osisi.
FranceBleu - webụsaịtị akụkọ ama ama na France - emeela akara Mbeumo dị ka onye olile anya nke French Football. N'oge ahụ, ndị na -agbachitere asọmpi enweghị ike iru ya, ka m na -edekwa Bio a, ọ na -enwe nnukwu mmetụta na Premier League.
N'agbanyeghị otuto dị ukwuu gbara aha ya gburugburu, anyị na -achọpụta na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ agụọla nkenke Bryan Mbeumo's Biography. N'ihi nke ahụ, anyị mere atụmatụ ịkwadebere gị ya. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Bryan Mbeumo Childhood:
Maka ndị na -amalite Biography, onye egwuregwu bọọlụ French nwere aha otutu - BMW (anyị ga -agwa gị otu o siri nweta nke ahụ ma emechaa). A mụrụ Bryan Mbeumo n'ụbọchị 7th nke Ọgọst 1999 nye nne French Angelique Gouge, na nna Cameroon, na Avallon, etiti ọwụwa anyanwụ France.
Bryan abịaghị n'ụwa dị ka naanị nwa nne ya na papa ya mụrụ. Ọ nọrọ ọtụtụ ụbọchị nwata ya na nwanne nwanyị nke okenye. Ọ na -aga n'aha Maeva Gouge. Foto dị ebe a, nwanne ya nwoke anabataghị aha Baller nke Cameroon - Mbeumo.
Zute Maeva Gouge. Ọ bụ nwanne nwanyị nke okenye Bryan Mbeumo.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ma ndị otu ezinụlọ na ndị agbata obi hụrụ obere Bryan ka ọ bụrụ nwa nwoke nwere mmasị. Ọzọkwa nwere uche, na -atọkwa ụtọ ịnwe. N'ihi nkuzi nke nne na nna ya, obere Bryan lekwasịrị anya - na mmalite ndụ ya.
Ka ọ dị ugbu a, ncheta kachasị mma nke ịmaliteghachi ihe banyere nwata abụghị ihe ọzọ karịa ịgba bọl na ịchọ ịdị ka ya Thierry Henry. Ọ bụ nnukwu nwa nwere agwa na-enweghị atụ na mmụọ siri ike. Ndị maara ya n'oge ahụ na -akpọkarị ya Onye na -achọkarị izu okè.
Ezinụlọ Ezinụlọ Bryan Mbeumo:
Ihe mbụ nke mbụ, onye ọkpụkpọ French esiteghị na nzụlite bara ọgaranya. Kama, ọ sitere na ezinụlọ Avallon nke etiti. Ọ bụ ezie na nne na nna Bryan Mbeumo enweghị ọrụ kacha mma na agụmakwụkwọ ego, ha ka nwere ike ijikwa ezinụlọ ha - na -agbasi mgba ike.
Dabere na ọnụ ọgụgụ mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na Instagram, ọ dị ka kpakpando Franco-Cameroon dị nso na nne na nna ya. Foto dị n'okpuru na -akọwa njikọ chiri anya dị n'etiti Bryan na nne ya ọ hụrụ n'anya - Angelique Gouge.
Zute otu nne na nna Bryan Mbeumo - nne ya. O yiri ka ha dị ezigbo nso.
Mmalite ezinụlọ Bryan Mbeumo:
Iji nyere gị aka ịghọta ebe o si bịa, ihe mbụ ị ga -amata bụ eziokwu na Baller bụ onye agbụrụ Cameroon. N'ụzọ bụ isi, Mbeumo nwere mba abụọ ejikọtara na mgbọrọgwụ ya. Ha gụnyere Cameroon na France.
N'ihi ya, ị nwere ike ịkọwa ya dịka onye egwuregwu bọọlụ nwere mgbọrọgwụ Franco-Cameroon. Mbeumo nwere agbụrụ abụọ jikọtara na mbido ya. Nke mbụ bụ Ndị Cameroon nọ na France site na nna ya (nde 4 nke France Population). Mgbe ahụ site na mama ya, ọ bụ ezigbo onye France.
Banyere obodo ezinụlọ French ya:
Nne na nna Bryan Mbeumo nwere ya na Avallon, ọgbakọ dị na ngalaba Yonne, etiti ọwụwa anyanwụ France. N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị echeghị na “enyi” bụ okwu ziri ezi a ga -eji kọwaa obodo French. Mana anyị nwere ike ịsị na Avallon juputara na ndị hụrụ ihe ọchị n'anya.
Na mgbakwunye na ịbụ onye a maara dị ka obodo nwere enyi, Avallon ji akụ na ụba bara ụba gọzie ya. Ndị ọchịchị ime obodo na-anọchite anya etiti-ọwụwa anyanwụ France mgbe a bịara imepụta bisiki, gingerbread, osisi, mmanya, anụ ụlọ na ihe ubi.
Mmụta Bryan Mbeumo:
Mgbe ị na -enwe oke agụụ nke ịbụ onye egwuregwu ịgba bọọlụ, ịga ụlọ akwụkwọ weere na ọ dị mkpa - dị ka nne na nna ya si kwuo. Avallon (obodo Bryan toro) bụ ebe kachasị mma iji mezuo nrọ agụmakwụkwọ ya yana ịtọ ntọala ọrụ ya.
Dabere na nyocha, Bryan Mbeumo bụbu nwa akwụkwọ mahadum Jeanne d'Arc. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ nnabata nke dị n'obodo ya na ebe amụrụ Avallon.
Akụkọ Bryan Mbeumo Football:
Mgbe nnwale gara nke ọma, nwa amaala Avallon malitere ọrụ ntorobịa ya (mgbe ọ dị afọ isii) na agụmakwụkwọ obodo ya - CO Avallonais. Akụkọ nwere ya na Bryan rụrụ nke ọma - site n'ụbọchị mbụ ọ sonyere klọb agbata obi ya.
N'ime afọ 2011, onye egwuregwu ịgba bọọlụ na -achọsi ike mere nkwuwa okwu na ọrụ ntorobịa ya. Mbeumo nakweere mbufe na Bourgoin-Jailieu. Dịka anyị siri hụ nyocha anyị, ụlọ akwụkwọ mmuta a dị ihe dị ka awa 3 site na obodo ezinụlọ Bryan - Avallon.
Bourgoin-Jailieu bụ Avallon bụ awa 3 na nkeji iri na atọ-ebe ezinụlọ Mbeumo bi.
Na nke mbụ na ndụ ya, Bryan Mbeumo kwesịrị ịhapụ CO Avallonais na obodo ya - na -efu nne na nna ya na ndị ọzọ ọ hụrụ n'anya. Njem ahụ gara n'ihu na ndịda France akwụsịghị ogologo oge. Nwa nwoke dara ogbenye enweghị ike ịnagide ya na ihe na -erughị ọnwa ise, ọ na -akwali ịlaghachi n'ụlọ.
N'afọ ahụ 2011, Mbeumo laghachiri klọb ochie ya - CO Avallonais - ebe ọ malitere ọrụ ya. Ịgbatị ọnụnọ ya na klọb hụrụ ya ka ọ na -etozu oke. N'ikwu nke a, na -eche oge kwesịrị ekwesị iji kwado onwe ya na agụmakwụkwọ ka ukwuu.
Bryan Mbeumo Biography - Ụzọ ama ama Akụkọ:
Gburugburu 2013 (agadi 14), ọ dị njikere ime nnukwu ọfụma n'ọrụ ya. Site na ikpe ikpe gara nke ọma, Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), nke a na -akpọkarị Troyes nabatara Mbeumo. Oge a, o tozuru oke ịhapụ nne na nna ya.
Site n'ụlọ ezinụlọ Bryan Mbeumo dị na Avallon ruo ES Troyes AC - anya dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 2 mgbe ị na -anya ụgbọ ala. Nwa dị afọ 14-n'agbanyeghị na ọ nwere ike lekọta onwe ya-ka nwetara nkwado n'aka nne na nna ya n'ịhụ na ahụ ruru ya ala.
Mbeumo na -eto eto si Avallon gaa Troyes ịchụso nrọ ya nke ịgba bọọlụ.
Onye na -eto eto enweghị nsogbu na mpaghara ime mgbanwe na ndụ ya na ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ntụkwasị obi Bryan Mbeumo toro nke ukwuu. Mbanye na mkpebi siri ike ime nke ọma hụrụ ya ka ọ na -agụsị akwụkwọ na Troyes academy n'oge ndekọ - afọ 17.
Biography Bryan Mbeumo - Akụkọ ịga nke ọma:
ES Troyes onye bụbu onye njikwa Jean-Louis Garcia, kwadoro ya ka ọ soro Troyes II ozugbo ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na klọb ahụ. Mgbe ya na ihe ndozi, nke Bryan Mbeumo obi ike gara n'ihu na -eto.
Mgbe o ji ihe nchekwa Troyes tụọ ihe mgbaru ọsọ 14, ọ nwetara nkwalite kwesịrị ya nke ukwuu na ndị otu ES Troyes AC. Ọ joyụ ezinụlọ Bryan Mbeumo amaghị oke mgbe onye ezinaụlọ ha hụrụ n'anya kpọrọ oku ka ha bịa nnukwu asọmpi - 2018 Coupe Gambardella.
Echere na olile anya nke ESTAC, ịma mma Bryan Mbeumo nyeere ndị otu ya aka ịga ebe dị anya - ruo n'ókè nke imeri asọmpi Coupe Gambardella. Site na mgbe ọ mere emume iko, ọtụtụ klọb gafee Europe malitere ịrịọ maka mbinye aka ya.
Nke a bụ ihe ịga nke ọma Bryan Mbeumo nke mbụ - n'ọrụ aka ọrụ ya.
Isi okwu ES Troyes - Nnukwu mbido mbụ na aha Mbeumo:
Vidiyo dị n'okpuru na -akọwa ihe niile. Ọ na -agwa anyị ihe kpatara klọb asọmpi England mgbe ahụ ji na mpaghara nkasi obi ha bịanye aka na Bryan Mbeumo si Troyes. Site na ilele ya, ị ga -ekwenye na m na hype gbara okirikiri ahụ kemgbe otu ụbọchị - adịla n'ezie.
Nkatọ isonyere Brentford:
Ị maara?… Bryan Mbeumo katọrọ nke ukwuu maka mkpebi ya isonyere Brentford. N'ịzaghachi ndị nkatọ, azịza ọ nyere yiri nke ahụ site na Diogo Jota na Rúben Neves. Cheta, kpakpando ndị a bịanyere aka na mbụ maka ndị otu egwuregwu mbụ - Wolves.
Maka Mbeumo nwere obi ike, ihe niile gbasara - Iche echiche nke ukwu na ibido obere. Ọbụna Diogo Jota, Ruben Neves na Neal Maupay mere mkpebi ha site na klọb kacha elu maka otu ihe kpatara ya. Ka m na -ede akụkọ ndụ a, ndị egwuregwu bọọlụ a emechiela ndị nkatọ ha ọnụ.
Dị ka a tụrụ anya ya, ọ nwere ọmarịcha mmalite nke ndụ na Bees. Mmekọrịta dị egwu n'etiti ya, Benrahma kwuru, na Ollie Watkins kpalitere aha otutu ha BMW (nke sitere na aha nna ha). Ikike ha nwere chụpụ Brentford ka ọ dị ebube enweghị onye nke abụọ.
Ị hụrụ atọ a? ha bụbu ndị na -egbu egbu n'asọmpi Bekee.
Dị ka ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike, ndị isi bọọlụ England matara ọrụ Bryan Mbeumo. Nke ahụ mere ka ọ nweta nhọpụta maka onye ọkpụkpọ afọ 2020 EFL yana kwa, onye ọkpụkpọ na -eto eto nke afọ London Football Awards.
Oge 2020/2021 nwetagoro nke ọma maka ọkpọ ọkpọ French ka ndị otu Brentford ha lụsoro ọgụ na bọọdụ onye isi asọmpi. Site na ọpụpụ nke Ollie Watkins na Said Benrahma, Bryan Mbeumo nwere ụdị nke ya Sergi Canos na Ivan Toney n'akụkụ ya.
Nrọ Premier League:
Ụbọchị 29 nke Mee 2021 bụ ụbọchị Mbeumo na -agaghị echefu echefu. Onye ọkpọ ahụ mere ka ezinụlọ ya dị mpako site n'inyere Brentford aka imeri Final play-off Championship. Ị maara?… Ọ bụ oge mbụ n'akụkọ ihe mere eme klọb nwetara nkwalite n'ime Premier League.
Site na ibuli iko a na -agaghị echefu echefu, Bryan Mbeumo kwadoro ọhụụ ya maka ịgba bọọlụ. Maa amụma? ọ zaghachikwara ndị nkatọ ya site n'ikwu ihe ndị a;
Enwere ọtụtụ ajụjụ gbasara m mgbe m bịanyere aka na Brentford, ọbụlagodi mgbe m nwere onyinye na Ligue 1.
Oge abụọ a bụ ụzọ dị mma ịza ndị nkatọ m. Emere m nhọrọ ziri ezi wee nweta oke ntozu oke.
Njikọ Premier League:
Ndụ n'ọdụ ụgbọ elu Bekee bịara kadị mma ka onye ọkpọ French na-eto site n'ike ruo n'ike. N'oge a na -ede Bryan Mbeumo Biography, o nyeere Brentford aka ime ka ọkwa ha dị ka egbe Premier League n'etiti. Lee, Mgbaru Ọsọ na Enyem aka ya.
Obi abụọ adịghị ya, football French na -achọ ịhụ ụdị ọzọ nke Eric Cantona na-agbapụ n'ụzọ ya n'ime talent ụwa. Bryan Mbeumo bụ n'ezie otu n'ime ndị kachasị mma n'ahịrị enweghị ngwụcha nke nku nku French. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu maka Mbeumo's Bio, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwanyị Bryan Mbeumo/nwunye ga -abụ:
Nwoke na -eme nke ọma dị ka ya kwesịrị WAG mara mma. Ọzọkwa, enweghị agọnarị eziokwu na ọmarịcha mma Mbeumo agaghị adọta ụmụ nwanyị. Karịsịa ndị ga -alụ ọgụ ịbụ nwunye ya ma ọ bụ nne nke ụmụ ya.
Onye ka Bryan Mbeumo na -akpa? Ajụjụ gbasara njirimara enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya ka ọ bụrụ.
Mgbe anyị nyochachara nke ọma n'ime ndụ onwe ya, anyị na -achọpụta - na ọ nwere ike bụrụ na onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara nke France na -edebe ihe omume ya n'azụ ụzọ. N'ihi nke ahụ, ọnọdụ mmekọrịta Bryan Mbeumo ka bụ nke amabeghị. Ọ dị mma, ọ bụ naanị obere oge tupu ya ekpughere ya.
Ndụ Onwe nke Bryan Mbeumo:
Akụkụ a nke Winger's Bio na -ekpughere ụfọdụ eziokwu gbasara ihe omume ya - pụọ na ihe ọ na -eme na pitch. Ọ na -enye azịza nye ajụjụ a - Onye bụ Bryan Mbeumo?
Ihe mbụ ịmara banyere ya - bụ eziokwu na itolite afụ ọnụ ya ama ama dị ya mkpa dị ka ebumnuche ọ na -agụ. Mbeumo bụ onye dị umeala n'obi nke na -anaghị asị mba, na mgbasa ozi. Ọ na -anabata ajụjụ ọnụ ọbụlagodi n'ụlọ ebe a na -akpụ isi. Nke a bụ ihe onyonyo vidiyo.
Ọ na -ekele ezigbo enyi ya, onye nyeere ya aka idozi na England:
Ịhapụ nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya na France maka ọrụ na England abụghị nke ahụ dị mfe. Nke ka njọ bụ na Bryan Mbeumo amaghị ka esi asụ bekee. O mere ezigbo enyi ya (Saïd Benrahma) ka ọ bụrụ ezi ezinụlọ ya. Obi dị m ụtọ na onye Algeria nyeere Mbeumo aka idozi.
Site na foto a, ị nwere ike ịkọ na kpakpando bọọlụ abụọ dị ezigbo nso.
Ọ na -echefu mmalite ezinụlọ ya:
Bryan Mbeumo na-ejide Avallon, mgbọrọgwụ French nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ-dị ya n'obi. N'otu oge ezumike ya, o jiri ohere gaa kọleji Jeanne d'Arc. Cheta?…. nke a bụ ụlọ akwụkwọ mbata ọ gara na Avallon.
Mbeumo bụ naanị nwoke nwere obi ọla edo. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ya na Patrick Bocquel, onye njikwa agụmakwụkwọ nke ngalaba egwuregwu ụlọ akwụkwọ ahụ na -arụkọ ọrụ. Bryan Mbeumo jiri bọọlụ tinye ụmụ akwụkwọ niile na -arụsi ọrụ ike na ngalaba egwuregwu ụlọ akwụkwọ. Onye egwu egwu anaghị echefu mgbọrọgwụ ya.
BMW bụ ụdị onye anaghị echefu ebe mere ya, n'agbanyeghị ihe ịga nke ọma.
Ndụ Bryan Mbeumo:
A bịa n'ihe ụtọ, ọkachasị n'oge ezumike, kpakpando French na -enwe ntụrụndụ ọ na -ahọrọ mgbe niile. Ndụ ndụ njem ọzara Mbeumo ezughị ezu na -ejighị igwe kachasị amasị ya gbaa ọsọ. Lee ahụmịhe na -agaghị echefu echefu ọ na -enwe ebe a.
Dịka e kwuru n'elu, ụgbọ ala Bryan Mbeumo bụ ọkacha mmasị Desert Buggy High-Speed ​​4 × 4 Fast Race electric Runner. Ụgbọ ala ike ahụ bụ igwe dị jụụ - nke nwere aha ama ama maka mkpọda ọzara.
Ndụ Ezinụlọ Bryan Mbeumo:
Onye egwuregwu bọọlụ France ka na -agba mbọ ka ya na ndị ezinụlọ ya na -enwe ezi mmekọrịta - ọkachasị nne ya na nwanne ya nwanyị. Na ngalaba a, anyị na -agwa gị ntakịrị ihe gbasara ndị ezinaụlọ ya.
Banyere Bryan Mbeumo Nwanyị:
Ọtụtụ mgbe a na -akpọ ya onye nzọpụta, Maeva Gouge bụ nọọsụ France - site na ọrụ. Ịga ụlọ ọgwụ ịnụ ụtọ agụụ ya abụghị naanị ọrụ ya. Na mgbakwunye na ịbụ nọọsụ, Maeva na -enwetakwa oge iji kirie nwanne ya nwoke n'ọhịa. Ọ ka bụ otu n'ime ndị kacha nwee mmasị na ya.
Anyị na -achọpụta na, n'adịghị ka papa ya, Maeva Gouge bụ oyiri nke nne ya - ọkachasị n'ihe gbasara agba akpụkpọ na ọdịdị ihu ya. Ọ bụ eziokwu na ụmụnne nwanne na -eto eto na -enwe mmetụta mmetụta ịhụnanya karịa. Nke a na -akọwa mmekọrịta Bryan Mbeumo na nwanne ya nwanyị nke okenye.
Maeva Gouge na nwanne ya nwoke nwoke na -enwe mmekọrịta dị mma.
Banyere Bryan Mbeumo Nna:
Ihe mbụ ịmara banyere ya - bụ eziokwu na ọ bụ nwa Cameroon. Eleghị anya, ọ ga -abụrịrị na nna Bryan Mbeumo si na mba ọdịda anyanwụ Afrịka kwaga France - ebe ọ zutere nne ya.
Mgbe anyị na -eme nyocha anyị, anyị chọpụtara na Bryan Mbeumo ka ga -ekpughe ozi ọ bụla gbasara Nna ya na ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a na -eme ka anyị nwee ike na ndị egwuregwu bọọlụ nwere ike ọ gaghị anọ papa ya nso. Ka o sina dị, Bryan ka na -ebu aha nna Kamerun.
Banyere Bryan Mbeumo Nne:
Angelique Gouge bụ nwa afọ Burgundy, mpaghara akụkọ ihe mere eme na ọwụwa anyanwụ-etiti France. Mmekọrịta ya na Mr Mbeumo dugara ọmụmụ nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya na onye na -akpa afọ ezinụlọ - Bryan.
Ka m na -ede Bio a, enweghị akwụkwọ na ọnọdụ mmekọrịta Angelique Gouge na nna nwa ya nwoke. Agbanyeghị na otu ihe doro anya - ọ bụ eziokwu na nne na nwa nwoke nọ ezigbo nso.
Bryan Mbeumo Eziokwu efu:
Ịchịkọta Bio a, anyị ga -eji ngalaba a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara kpakpando Brentford. N'atụghị egwu, ka anyị gaa n'ihu.
Eziokwu nke 1 - Bryan Mbeumo yiri okenye karịa afọ ya:
Kemgbe a bịara ka ọ pụta ìhè, enwere ọtụtụ ajụjụ a jụrụ. Karịsịa nke metụtara ụbọchị ọmụmụ Mbeumo ma e jiri ya tụnyere ọdịdị ihu ya. Eziokwu ka dị, Winger na -ele anya karịa afọ ndụ ya.
N'agbanyeghị izi ezi nke ụbọchị ọmụmụ ya, ajị agba na ntutu ntutu Bryan Mbeumo na -eme ka ọ yie okenye karịa ka ọ dị. Nke a na -ewetara anyị ajụjụ; Ọdịdị nwere ike ịmanye Mbeumo n'ụzọ Arjen Robben (na -ekwu maka ụbọchị Chelsea ya)?
Eziokwu nke abụọ - Bryan Mbeumo bụ Billionaire na Cameroon:
Ebe nne na nna nna ya na ndị nna nna ya siri bịa, onye ọrụ Cameroon oge niile na-enweta ihe ruru 116,000 XAF kwa ọnwa. Yabụ, ọ ga -ewe afọ 30 maka nkezi nwa amaala Cameroon iji Brentford na -akwụ Bryan Mbeumo ụgwọ kwa ụbọchị.
Nkwụsị ụgwọ ọnwa a (stats 2021) na -eji ọnụego mgbanwe ugbu a n'etiti ego Cameroon na nke Pound. Ọ na -egosi na Mbeumo bụ onye ijeri ego n'obodo nna ya.
Ndahie ụgwọ ọnwa Bryan Mbeumo na XAF (Central African CFA Franc)
Ndakpọ ụgwọ ụgwọ ọnwa nke Bryan Mbeumo (£)
Kwa Afọ 1,277,687,698 XAF £ 1,666,560
Ọnwa kwa: 106,473,974 XAF £ 138,880
Kwa Izu: 24,533,173 XAF £ 32,000
Kwa :bọchị: 3,504,739 XAF £ 4,571
Oge Awa ọ bụla: 146,030 XAF £ 190
Nkeji ọ bụla: 2,433 XAF £ 3
Sekọnd ọ bụla: 40 XAF £ 0.05
Ebe ọ bụ na -ele Bryan Mbeumo'Bio, nke a bụ ihe o nwetara na Brentford.
Eziokwu #3 - Profaịlụ Bryan Mbeumo:
Ị chọpụtala?… Ndị egwuregwu bọọlụ French dị ka Youssef En-Nesyri na Jeremy Doku - mgbe ọ bịara ije na nka ya. Obi abụọ adịghị ya na Mbeumo nwere àgwà, mana nke ahụ ka ga -egosipụta na profaịlụ FIFA 2021 ya. Anyị na -atụ anya na EA ga -emeziwanye na ọkwa ya.
Eziokwu nke 4 - Okpukpe Bryan Mbeumo:
N'okwu gbasara okwukwe, anyị na -achọpụta na Winger (dịka nke 2021) ka ga -akpọsa echiche ya. Enweghị akara ọ bụla iji mata okpukpe ya mgbe ọ na -eme ebumnuche ya ma ọ bụ bipute ya na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ya. Nke a na -eme ka o sie ike izo aka na okpukpe ọ na -ekpe.
N'agbanyeghị ebumnuche dị n'elu, nsogbu anyị na -akwado nne na nna Bryan Mbeumo na -azụlite ya dị ka onye Kristian. Ihe karịrị 50% ndị mmadụ nọ na France na -ekpe Iso Christianityzọ Kraịst na ezinụlọ ya nwere ike iso na otu a.
Tebụl dị n'okpuru na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara Bryan Mbeumo.
AKWKWỌ AKW BIKWỌ AKW .KWỌ
Aha n'uju: Bryan Mbeumo
aha otutu: BMW
Ụbọchị ọmụmụ: 7nke nke August 1999
Age: 22 afọ na ọnwa 3.
Ndị nne na nna: Angelique Gouge (Nne) na Mr Mbeumo (Nna)
Ụmụnne: Maeva Gouge (Nwanne nwanyị nke okenye)
Nationality: French, Cameroon
Agbụrụ: French onye Cameroon
Ezinụlọ Ezinụlọ: Avalon, France
elu: 1.71 mita ma ọ bụ 5 ụkwụ 7 sentimita asatọ
Education: Jeanne d'Arc kọleji, Avallon
Ezigbo Net: 2.5 nde pound (2021 stats)
Ụlọ akwụkwọ gara: CO Avallonais, Bourgoin Jallieu na Troyes
Egwuregwu Ọnọdụ: Winger
Kpakpando Switzerland Breel Embolo na onye ọkpọ French, Bryan Mbeumo, so na ndị egwuregwu bọọlụ abụọ na -eme nke ọma na Europe nwere ọbara Cameroon site na nna ha. Ha abụọ toro na France. Ihe nzuzo maka ihe ịga nke ọma Bryan Mbeumo bụ ịrụsi ọrụ ike, nkwenye onwe onye na nkwado ezinụlọ.
Ọbụlagodi mgbe ndị egwuregwu bọọlụ jụrụ ajụjụ mkpebi ya isonye na ngalaba nke abụọ nke Bekee site na Ligue 1, Bryan Mbeumo mere nkwenye onwe ya ka ọ bụrụ okwu nche ya. Ka m na -ewepụta ihe ncheta a, ọ na -esonye na nke Kevin mbabu, onye gosipụtara na ndị nkatọ adịghị mma.
Enwere m olileanya na ị ga -ahụ akụkọ ndụ Bryan Mbeumo ka ọ baara gị uru. Na Lifebogger, anyị na -eche maka izi ezi nke ọdịnaya anyị Ndị egwuregwu bọọlụ French. Jiri nwayọ gbasaa (site na nkọwa ma ọ bụ jiri ibe kọntaktị anyị) ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na -adịghị mma na Bio a.
Ma ọ bụghị ya, dịka oge niile, anyị na -ekele gị - maka ịgabiga akụkọ ndụ Bryan's Life. Anyị na -atụ anya na ị ga -aza ajụjụ na akụkọ kachasị na akụkọ egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ.
Akwụkwọ akụkọ Brentford Football